Nway, Author at Lifestyle Myanmar - Page2of 25
Toxic Peopleဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ? ကိုယ့်အနားမှာToxic Peopleတွေရှိလာတဲ့အခါ ကိုယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ?
Toxic People ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့သူ၊ ကိုယ်က အေးအေးဆေးဆေးနေရင်တောင် ကိုယ့်ဆီ ထိပ်တိုက်အပူတွေယူလာပေးသူ၊ တခြားမလိုအပ်တဲ့ စိတ်ညစ်စရာတွေ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေလာပေးနေတဲ့သူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခင်လို့အမှန်တကယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ အားနည်းချက်တွေသိချင်တယ်၊ ပြီးရင် တစ်ဖက်မှာပြန်ပြောမယ် လှောင်ရယ်မယ်၊ ကိုယ်အကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာ ရှောင်ထွက်မယ်...
အသက်အရွယ်ကြီးလာရင် နောင်တရနိုင်မယ့် ငယ်ရွယ်စဥ်က မလုပ်ခဲ့မိတဲ့အရာများ
'အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လစိုက်၊ မိုးရွာတုန်း ရေခံ'ဆိုတဲ့ စကားပုံတွေအတိုင်း ကိုယ့်အသက်ငယ်ရွယ်တုန်း၊ အချိန်တွေရှိတုန်းမှာ ဘဝအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေတစ်ချို့က ၁.အချိန်ဆွဲခြင်း လူတော်တော်များများရဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုက အချိန်ဆွဲတာပါ။ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်ကို အချိန်ဆွဲမနေဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေက အလကားမဖြစ်ရတော့ဘူးပေါ့။...
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ရှာဖွေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူရတဲ့အရာလို့ ထင်မိပါတယ်။ 'ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကို စားလိုက်ရတယ်၊ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ခရီးကို သွားလိုက်ရတယ်၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာလေးတွေကို ဝယ်လိုက်တယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အပြင်လျှောက်လည်လိုက်တယ်' ဒါတွေက ပျော်ရွှင်မှုတွေလား? ဟုတ်ပါတယ်… ကိုယ့်ဆီကို...
ဘယ်တော့မှလက်မထပ်သင့်တဲ့ယောကျာ်း (၆) မျိုး
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် အိမ်ထောင်ကျတယ်ဆိုတာ ‘ထောင်ကျသလိုပါပဲ’ ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဘူးကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း သေသေချာချာအလေးအနက်ထားစဥ်းစားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုမှားခဲ့ရင် တစ်သက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲပြီး ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်နေရမှာပါ။ အချစ်တစ်ခုထဲကိုကြည့်ပြီးမရွေးချယ်သင့်သလို ကိုယ့်ဘဝကြီးက အချစ်တစ်ခုထဲရှိရုံနဲ့လည်း ပြီးပြည့်စုံပြီးမသာယာနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်ရာမှာ ဘယ်တော့မှထည့်မစဥ်းစားသင့်တဲ့ ယောကျာ်း (၆) မျိုးကတော့ ၁....
စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီ (သို့) Depression ဝင်နေပြီဆိုရင်
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုပြီး ညည်းညူနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကျလာပြီဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးတွေပျက်ခြင်း၊ အစားစားချင်စိတ်တွေပြောင်းလဲလာခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတွေလျော့နည်းလာခြင်းတွေက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကတော့ ကိုယ့်လုပ်နိုင်စွမ်းအားတွေ လျော့ကျလာမယ်၊ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အရာတွေကို စိတ်မဝင်စားဘဲဖြစ်နေမယ်၊ မိသားစုဝင်တွေ သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပါ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေမှုတွေထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို...
"မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေ" မိန်းကလေးတိုင်းပြည့်ချင်ကြတဲ့ ဆုတောင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် လူချစ် လူခင်ပေါများတယ်ဆိုတာ မွေးရာပါ ပါရမီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ ငါ့ကို မချစ်ကြဘူးလား လူတွေကိုယ့်ကိုမချစ်ကြဘူးလားဆိုပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်တွေက မိန်းကလေးတိုင်းမှာ အနည်းနဲ့အများရှိကြစမြဲပါ။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်အနားကသူတွေ ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်လာစေဖို့ ပြုမူနေထိုင်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို...
မည်းညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြားအသားအရည်ကို သဘာဝအတိုင်းပြန်လည်ဖြူဝင်းလာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးများ
ကိုယ့်ချိုင်းကြားအသားအရည်မည်းညစ်နေမယ်ဆိုရင် လူအများအမြင်မှာလည်း အတော်လေး အကျည်းတန်စေတဲ့အပြင် အသားအရည်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာတွေလည်း မကြာခဏ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာလေးတွေကို ပိုက်ဆံကုန်သက်သာပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေကတော့ ၁. အာလူး potato အာလူးကို အခွံခွာပြီး ကြိတ်ပါ။ အရည်ကို ညှစ်ယူပြီး...